Ukutshintshiselana komxholo wenkampani kunxibelelwano lwangoku lweendaba: Isichazi | I-NAB bonisa iindaba | I-2020 NAB bonisa iqabane leMedia kunye noMvelisi weNAB Veza UKUPHILA. Iindaba zoSasazo lobuNjineli
Ikhaya » Ukuhanjiswa kokuqukethwe » Ukutshintshiselana komxholo wenkampani kunxibelelwano lwangoku lweendaba: Isichazi
IGosa eliyiNtloko leQhinga, uSigniant
Kwimizi-mveliso yanamhlanje yemithombo yeendaba, ukuhambisa isixa esikhulu somxholo ngokukhawuleza nangokukhuselekileyo phakathi kwamaqabane kubaluleke kakhulu. Ukutshintshiselana ngomxholo ozenzekelayo, ophakathi kwenkampani, phakathi kweenkampani zabo bonke ubungakanani kunye nejografi, kubaluleke kakhulu kwimveliso kwaye ngakumbi kusasazo lweefilimu eziguqukayo kunye ezahlukeneyo, iinkqubo zikamabonwakude, imidlalo yevidiyo, ii-asethi ze-OTT / VOD, kunye nezinto ezinxulumene nazo kunye imethadatha kwiindawo ezininzi kwikhonkco lokubonelela nangaphezulu kwamaqonga.
Inyaniso esisiseko namhlanje kukuba akukho ntlangano sisiqithi. Iiligi zezemidlalo zisebenza nabasasazi kunye nelayisensi yamalungelo osasazo kwihlabathi liphela; izitudiyo zihambisa umxholo kumabhanyabhanya, kwizikhululo zikamabonwakude kunye nabaqhubi bekhebula, amaqonga eVOD, kunye namaqonga e-OTT; Umkhosi wabaphuhlisi bomdlalo kunye nabavavanyi kwihlabathi liphela basebenza kunye ukuvelisa amava emidlalo eblokbuster. Oku akunakwenzeka ngaphandle kotshintshiselwano lomxholo olukhuselekileyo nolukhuselekileyo olunokusebenza ngaphakathi naphakathi kweenkampani.
Ukuhambisa kunye nokufikelela kumxholo phakathi kwamaqela ngaphakathi kwintlangano kunokuba ngumceli mngeni ngokwawo. Ukukwazi ukwenza njalo kwimibutho eyahlukeneyo kuphakamisa ubunzima. Ngenxa yobume beshishini kwi-2020, ukusebenza phakathi kweenkampani kuyinto eqhelekileyo kwaye iinkampani kufuneka zikwazi ukukhawulezisa nangokungagungqiyo ukutshintshisa umxholo ngokukhuselekileyo- oko kunyanzelekile.
Ukutshintshiselana ngomxholo wenkampani: ubuhlakani behlabathi, umxholo wengingqi
Amashishini e-M & E ayazi ukuba ziyakhula iimfuno kunye nabaqhubi bamashishini abafuna ubuhlakani bokuqinisekisa ukudala kunye nokuhanjiswa komxholo wabo. Ukwanda kwesidingo semxholo wasekhaya kumaqonga amaqonga amatsha kukwaveza isidingo sodibaniselwano olunxibeleleneyo kunikezelo olukhulu nolunzima. Nokuba sisidingo sokuvelisa umxholo wokusasazwa kwinqanaba lehlabathi okanye iligi yezemidlalo ehambisa amanqaku aphezulu kuthungelwano lwamaqabane osasazo, amashishini eendaba ngokwendalo azifumana enxibelelana ngakumbi, inkqubo yazo yendalo nangakumbi, kunye nemfuno yokuhambisa umxholo ngakumbi kwaye kubaluleke ngakumbi. Okokuba le webhu sele ixakekile ngoku ibandakanya ukugqabhuka kweefomathi ezahlukeneyo kunye namaqonga (iithiyetha, iindawo zokusasaza, usetyenziso lweendaba zosasazo) kubeka uxinzelelo olukhulu kwimibutho yokuphuhlisa imixholo phakathi kwenkampani.
Namhlanje amashishini e-M & E ayakwazi ukuhambisa umxholo wawo kwihlabathi liphela kumaqonga ahlukeneyo kunye nabanikezeli bokwenza ukuhanjiswa kweenkampani phakathi kubaluleke ngakumbi kunangaphambili. Nokuba liqonga le-VOD elihambisa umxholo kubasebenzisi bekhebula, izindlu zokusasaza ifilimu ezithumela ii-DCP kwii-cinema, okanye uthungelwano lukamabonwakude oluhambisa umxholo ekudlaleni, ukuhanjiswa kwale mihla kufuna isixokelelwano sonikezelo esixhumeke kakhulu esixhaswe kukudluliselwa okuzenzekelayo, phakathi kwenkampani.
Landela-uphuhliso lomdlalo welanga
Okanye, jonga umphuhlisi womdlalo osebenza nesitudiyo esahlukileyo kwisihloko sabo se-blockbuster. Njengamaqela kumbutho omnye esenza utshintsho kulwakhiwo abagxile kulo, amaqabane abo kufuneka abenakho ukuthembela ukuba baya kuyifumana rhoqo ingxelo ehlaziyiweyo yomdlalo, ukuze bangafumani ngequbuliso iiyure zomsebenzi put in yayiyinguqulelo yakudala. Oku kuyimfuneko ngokukodwa ngokulandela-ukuhamba kwelanga okuxhomekeke kumaqela kwiindawo ezininzi zexesha. Ukuqinisekisa ukuba uhlobo oluchanekileyo lokwakha umdlalo kulapho kufuneka ukuba khona xa abantu abalandelayo behlala phantsi ukuze benze imisebenzi yabo kubalulekile ekuhambiseni imixokelelwane yonikezelo oluntsonkothileyo, ixesha lokuhlangana (ngakumbi kwishishini elaziwa kakhulu ngokwenza umzuzu wokugqibela) , kunye nokugcina, yintoni enokuthi ikhangeleke ngathi sisiphithiphithi, iyalelwe kwaye isebenze.
Iiseti zedatha ezintsonkothileyo ezinje ngesakhelo-ngesakhelo sefomathi
Ngelixa izenzekelayo, ukutshintshiselana phakathi kwenkampani kwenzeka rhoqo ngexesha lokudityaniswa kunye nokusasazwa, kunokuba ngumceli mngeni ngexesha lenkqubo yokudala umxholo. Xa ii-studio zokwenza imveliso kunye nezindlu ze-VFX zisebenza kwi-blockbuster enkulu, zihlala zisebenza ngeefomathi zesakhelo-ezinje nge-DPX okanye i-EXR. Kule meko, iifolda ezinezigidi zeefayile kufuneka zibuyiselwe kwisitudiyo okanye kwenye indlu yokuvelisa emva kwemveliso, nakwindlela elandelayo yelanga. Izixhobo ezisemgangathweni ziyasokola kwezi seti zedatha kwaye ngenxa yoko isoftware efanelekileyo yokuzenzekelayo kokuhamba komsebenzi iyafuneka.
Ukudibanisa amashishini amakhulu eendaba kunye namaqabane abo eSMB
Omnye umceli mngeni ohlasela ishishini kukuba ubuchwepheshe obuphambili obusetyenziswa ziinkampani ezinkulu akusoloko kufikeleleka kuthungelwano lwabathengisi abancinci ababalulekileyo kushishino. Ukuqhubela phambili kwitekhnoloji yelifu, ngakumbi izisombululo ze-SaaS, kunceda ukwahlula ezo zithintelo, ukubonelela ngamashishini amancinci izixhobo ezinamandla zokuthatha inxaxheba ngokulula kunxibelelwano lwehlabathi. Imiceli mngeni yezokhuseleko iyandiswa xa usebenza neenkampani ezininzi, uninzi lwazo luncinci. Ukuba neseti efanayo yezixhobo ukufezekisa imigangatho yokhuseleko ephezulu efunwa lushishino lwanamhlanje ayisiyonto intle, kodwa iyimfuneko. Ayisiyiyo kuphela ukuba izixhobo zikhusele umxholo abawutshintshayo, kufuneka kube lula ukuhambisa, ukulawula, kunye nokulingana ngokufanelekileyo kunye nexabiso eliza kwamkelwa lilo naliphi na ubungakanani beshishini.
I-Signiant iququzelela njani utshintshiselwano lomxholo wenkampani
I-Signiant kudala ingumthengisi othenjiweyo wotshintshiselwano lomxholo weenkampani kumzi mveliso. Imveliso yethu yoMphathi + yeeArhente isetyenziswa ziinkampani zemithombo yeendaba eziphambili zehlabathi zotshintshiselwano lomxholo ngaphakathi nangaphakathi kweenkampani. Imveliso yethu yeMedia Shuttle ivumela abantu ukuba bafikelele kwaye babelane ngomxholo kwihlabathi liphela kwaye ngoku idibanisa ngaphezulu kwama-25,000 amashishini abo bonke ubungakanani.
Xa sasungula iSigniant Jet ™ Kunyaka ophelileyo, sidibanise ubuchwephesha bethu kwinkqubo ye-automated system-to-system fayile kunye nobunkokheli kwi-SaaS yelifu. Oko kuyenze ukuba ubuchwepheshe be-Signiant's advanced automation kunye nokukhawulezisa itekhnoloji ifikeleleke kwiinkampani zabo bonke ubungakanani kwaye kunciphise ngokubonakalayo ukungqubana kweyona nkampani zinkulu zosasazo emhlabeni ekumiseni ukutshintshiselana komxholo kunye namaqabane abo amancinci.
Kwangoko kulo nyaka, uSigniant wandise ubuchule beenkampani phakathi, esongeza indlela elula kodwa ekhuselekileyo kwiJet yotshintshiselwano lomxholo phakathi kweenkampani. Ngale nto, iinkampani ezimbini ezineJet ngokulula nangokukhuselekileyo ziseta ukuthembana komnqamlezo, zilawulwa ngokupheleleyo kwilifu. Ukongeza, nangakumbi nangakumbi amashishini amkela iJet, iinkampani zinokwenza ukuba iziphelo zabo zifumaneke kwiqonga lethu lamafu ngokuqhubela phambili ukuqhuba nokutshintshiselana phakathi kwenkampani.
Nje ukuba ukuthembela emnqamlezweni kube phakathi kweenkampani ezimbini, banokuseta imisebenzi ekuvunyelwene ngayo ngokudibeneyo apho icala ngalinye linakho ukugcina ulawulo olupheleleyo lwendawo yokugcina kunye neenethiwekhi zabo. Akukho kwabelana ngamagama okugqitha okanye olunye ulwazi olubuthathaka olufunekayo njengoko ukubanjwa ngesandla kulawulwa ngokukhuselekileyo efini. Esi sisibonelelo esiphambili kunye nokwahlulahlula iqonga le-SaaS ye-Signiant enelungelo elilodwa lomenzi apho inqwelomoya yokulawula ilifu inikezela nge-orchestration, ukubonakala kunye nolawulo lokufikelela kodwa umxholo uhamba ngokuthe ngqo kugcino lwenye inkampani uye kolunye.
Ukutshintshiselana komxholo wenkampani yexesha langoku
Imithombo yeendaba kunye nokuzonwabisa ayikaze yahluke ngakumbi, ngakumbi kwihlabathi, okanye ibe namandla ngakumbi kunanamhlanje, kwaye le meko iya kukhawulezisa kuphela. Ubhubhane kunye nefuthe lalo kumzi mveliso lubonisa isidingo sokuba bhetyebhetye, ukuba nimble, kunye nokukwazi ukunxibelelana kumxokelelwano omkhulu wokubonelela. Ke kuya kufuneka uyithathele ingqalelo ukuze uzilungiselele umsitho wempembelelo olandelayo kwishishini?
Ukuhambisa iiseti zedatha ezibuthathaka kakhulu, ezinkulu, ezinzima phakathi kweenkampani kweli xesha langoku kufuna indlela entsha. Ifuna isoftware enokusebenzela naliphi na ubungakanani beshishini, enokuthi isebenzise nayiphi na i-bandwidth ekhoyo, kwaye inokusebenza ngalo naluphi na uhlobo lokugcina. Kuya kufuneka ibonelele ngokhuselo lweshishini kunye nokubonakala; isisombululo esibonelela ngokuthembeka xa ixesha elimisiweyo lixinekile kwaye iimeko zixinzelelekile. Kufuneka kube lula ukuhambisa nokusebenza kunye nokuvumela iinkampani ukuba zi-agile kwaye ziphendule kubume beshishini obunamandla. I-Signiant Jet ngobuchule bayo benkampani ephakathi yayilelwe ngqo ukufezekisa ezo mfuno.
Unomdla wokufunda ngakumbi ngeJet kwaye uyibone isebenza?
Previous: Umvelisi wokuphosa
next: I-GB LABS ZIBONISA IZISOMBULULO ZOKUGCINA ZAMANJE KWI-VIRTUAL BROADCASTASIA